China 201 ezishushu liqengqiwe insimbi coil ukwenziwa kunye mveliso | IHuaxiao
Sino Stainless Capacity malunga 201 Kushushu uqengqele coil insimbi , 201 HRC
Thelekisa ngokulula malunga no-201 kunye no-304
Emehlweni abathengi abaninzi, i-304 yentsimbi engenasici kunye ne-201 yentsimbi ephantse ukuba ayinakucaciswa kwaye ayinakubonwa ngamehlo. Apha siza kwazisa ngeendlela ezithile zokwahlula phakathi kwama-304 kunye nama-201.
1.Izichaziweyo: Iipleyiti zensimbi ezisetyenziswa ngokungaqhelekanga zihlulwe zaziindidi ezimbini ze-201 kunye ne-304, eyona nto ibunjiweyo, 304 esemgangathweni, kodwa ixabiso liyabiza, 201 imbi kakhulu. I-304 ibandakanya amacwecwe angenazintsimbi angeniswa ngaphakathi kunye nasekhaya, kwaye i-201 yipleyiti yentsimbi engenasiphelo yasekhaya.
Ukubunjwa kwe-2,201 yi-17Cr-4.5Ni-6Mn-N, eyenye intsimbi yokugcina i-Ni kunye ne-301 yentsimbi. Kwenziwe ngombane emva kokuqhubekeka okubandayo kwezithuthi zikaloliwe.
Ukwakhiwa kwe-3.304 yi-18Cr-9Ni, eyona nto isetyenziselwa intsimbi engenasici kunye nentsimbi enganyangekiyo. Izixhobo zemveliso yokutya, izixhobo zeekhemikhali zeXitong, amandla enyukliya njalo njalo.
I-4.201 ngumxholo we-manganese ophezulu, umphezulu uyakhanya ngombala oqaqambileyo omnyama, umxholo ophezulu wemanganese umhlwa ngokulula. 304 iqulethe chromium ngaphezulu, umphezulu matte, ayina rusi. Zimbini iintlobo zokudityaniswa. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukumelana nokubola okungu-201, ukunganyangeki kwe-201 kukubi, ngenxa yoko ixabiso liya kubiza kakhulu. Kwaye ngenxa yokuba i-201 iqulethe i-nickel ephantsi, ke ixabiso lisezantsi kune-304, ngoko ke ukuxhathisa umhlwa akulunganga njenge-304.
5. Umahluko phakathi kuka-201 no-304 yingxaki ye-nickel kunye ne-manganese. Ixabiso le-304 ngoku libiza kakhulu, kodwa ubuncinci i-304 inokuqinisekisa ukuba ayizukurusa ngexesha lokusetyenziswa. (Sebenzisa ipotiyiti yentsimbi ngentsimbi ukuzama)
6.Stainless yentsimbi akukho lula umhlwa ngenxa yokuba ukuyilwa chromium oxide phezu kobuso umzimba sentsimbi unako ukukhusela umzimba sentsimbi, 201 izinto aphezulu manganese insimbi 304 lukhuni, carbon eliphezulu kunye nickel ephantsi.
7.Ukubumba kwahlukile (ikakhulu ukusuka kwikhabhoni, kwimanganizi, kwi-nickel, kwi-chromium equlathe i-201 yentsimbi ukuya kwi-304).
Egqithileyo Ikhoyili yentsimbi ebunjiweyo engama-316
Okulandelayo: Iikhoyili zentsimbi ezingama-310 ezishushu neziqengqelekileyo